Facebook က Dating feature အသစ် ပြုလုပ်တော့မယ် – AsiaApps
Facebook က Dating feature အသစ် ပြုလုပ်တော့မယ်
May 2, 2018 May 2, 2018 MoonApp NewsNo Comment on Facebook က Dating feature အသစ် ပြုလုပ်တော့မယ်
အဟမ်း အဟမ်း !!! Mark Zuckerberg ကတော့ facebook ကို မြှားနတ်မောင်လုပ်ခိုင်းတော့မယ့်ပုံပါပဲ။ မနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ facebook developer တွေရဲ့ annual conference “F8” မှာ Mark Zuckerberg က dating feature အသစ်ကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ Dating feature ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အချိန်ကြာရှည် ခိုင်မြဲတဲ့ relationship တွေကို တည်ဆောက်ပေးချင်လို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။
Dating feature အသစ်ကို စစချင်းမှာ ကတည်းက လုံခြုံစိတ်ချမှု ရှိစေဖို့ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Feature အသစ်မှာ facebook ထဲက friend ဖြစ်ပြီးသားသူတွေကို dating partner အဖြစ်ရွေးချယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘဲ friend မဖြစ်သေးသူတွေထဲကပဲ dating partner ကိုရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ Facebook မှာ friend ဖြစ်နေရင် dating လုပ်လို့ မရဘူးလို့
Facebook ရဲ့ dating feature အသစ်မှာ profile အသစ်ကို first name (Family name) နဲ့ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ profile ကို facebook ပေါ်မှာ friend ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ၊ dating feature ကို အသုံးပြုတဲ့သူတွေ မြင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Newfeed မှာလည်း ပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ Dating feature မှာ သင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ Groups တွေနဲ့ ကိုယ့်မြို့ရဲ့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့
Events တွေကို အရင် browse လုပ်ရမှာပါ။ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ တစ်ခုကိုတွေ့ပြီဆိုရင် Event (သို့) Group ရဲ့ ညာဘက်အောက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ “unlock” ကို ရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ unlock လုပ်လိုက်တာနဲ့ အခြား unlock လုပ်ထားသူတွေရဲ့ profile အချက်အလက်တွေကို မြင်ရမှာပါ။ Profile ပေါ်က ဓာတ်ပုံ နဲ့ အခြား အချက်အလတ်တွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်နဲ့ dating လုပ်မယ့်သူကို ရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ Dating လုပ်မယ့်သူကို ရှာတွေ့ ပြီဆိုရင်တော့ messenger၊ Whatsapp တို့နဲ့ မတူတဲ့ special inbox ကနေပြီး conversation တွေကို စတင်နိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသုံးပြုသူတွေ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစေဖို့အတွက် စာပဲရိုက်ပို့လို့ ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dating feature အသစ်အကြောင်းကို စတင်ပြီး မိတ်ဆက်လိုက်ချိန်မှာပဲ facebook profile ကိုသုံးပြီး account ဖွင့်ရတဲ့ dating app ဖြစ်တဲ့ Tinder ရဲ့ parent company “Match Group” အပါအဝင်အခြား dating site တွေရဲ့ စတော့ ၁၉ရာခိုင်နှုန်းနီးပါး ကျဆင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ Dating feature အသစ်ကိုတော့ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ မြန်သထက်မြန်အောင် အသုံးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။
Dating feature အသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထောက်ခံသူတွေရှိသလို ဝေဖန်မှုတွေလည်း တော်တော်လေးကို ပြင်းထန်နေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အမြင်ကရော ဘယ်လိုလဲ ???? Dating feature ကို အသုံးဝင်တဲ့ feature တစ်ခုလို့ ထင်ရဲ့လား…
Handsome ဖြစ်တဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးပေးမယ့် Manly – Selfie Editor for Man
မကြာခင်ရောက်ရှိလာတော့မယ့် Messenger app ရဲ့ update အသစ်